Faah faahin ku saabsan furashadi ajaanibti laga soo afduubay Dhadhaab
Updated About:353 days ago 0
Tafaasiil dheeraad ah ayaa kasoo baxday afar shaqaalo gargaar oo ajnabi ah oo ay maanta ciidamada dowlada KMG Soomaaliya iyo kuwa Kenya kusoo furteen howlgal ay ka sameeyeen duleedka Dhoobleey.
Taliyaha ciidamada dowlada KMG Soomaaliya ee gobolada Jubooyinka G/sare Ismaaciil Saxardiid oo ka hadlay soo furashada shaqaalahan ka tirsanaa Hey’ada NRC ee xaga gargaarka bani,aadanimada ayaa sheegay in howlgalku uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo Cali Goleey oo 30-km u jiro magaalada Dhoobleey ee gobolka Jubada Hoose.
Wuxuu sheegay in howlgalka lagu furtay afarta ruux oo laba ay yihiin rag laba kalana ahaayeen dumar kuwaasi oo u kala dhashay dalalka Pakistan, Canada, Norway iyo Filibiin, sidoo kalana lagu qabtay sadex ka mid ah afduubayaasha halka la dilay mid ka mid ahaa.
Marki la badbaadiyey ayaa waxaa la geeyey Xerada Dhamaanjeey oo ay ciidamada AMISOM ee ka socda Kenya ku leeyihiin magaalada Dhoobleey.
Taliska ciidanka Kenya oo iyana ka hadlay howlgalka ayaa sheegay in ay ka qeybgaleen diyaaradaha qumaatiga u kaca, isla markaana ku faraxsanyihiin in iyaga oo bad qaba lasoo bad baadiyo shaqaalaha samafalka.
Afhayeenka ciidanka milatariga Kenya Cyrus Oguna ayaa sheegay in la heystayaasha ay haatan joogaan goob amaan ah xaaladooduna wanaagsantahay balse ay ka muuqato daal iyo diif aad u daran.
Sarkaal lagu magacaabo Maxamed Diini Adan oo ka mid ahaa ragi soo badbaadiyey shaqaalahan ajnabiga ah ayaa sheegay in ay kasoo qabteen meel howd ah kadib marki ay ka war heleen kooxo si qarsoodi ah u dhuumanayey kuwaasi oo kusoo dhacay ciidamada.
Shaqaalahaan ajnabiga ah ayaa Jimcihi lasoo dhaafay laga soo afduubay xerada Dhadhaab ee dalka Kenya oo ah tan ugu weyn caalamka oo ay ku noolyihiin qaxooti.